मेसीले बार्सिलोना छोड्ने संकेत, रोमामा अनुबन्धका लागि कुराकानी ! – Everest Dainik – News from Nepal
मेसीले बार्सिलोना छोड्ने संकेत, रोमामा अनुबन्धका लागि कुराकानी !
काठमाडौं, साउन १९ । बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी इटालियन सिरी ‘ए’ फुटबल क्लब रोमामा अनुबन्ध हुने संकेत देखिएको छ । रोमाका अध्यक्ष जेम्स पाल्लोतले मेसीलाई अनुबन्धबारे बार्सिलोनासँग सल्लाह भइसकेको कुराकानी सार्वजनिक भएपछि मेसी रोमामा जाने संकेत देखिएको हो ।
मेसीलाई रोमामा अनुबन्ध गर्ने सम्बन्धमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनासँग कुराकानी भइसकेको रोमा अध्यक्ष पाल्लोताले नै खुलासा गरेका हुन् । युभेन्टसले रियल मड्रिडबाट रोनाल्डोलाई ल्याएपछि रोमाले उनको बलियो प्रतिस्पर्धीको खोजी गरेको छ । यसक्रममा बार्सिलोनासँग मेस्सीका बारेमा कुरा भएको रोमाका अध्यक्ष पाल्लोतले बताएका हुन् ।
युभेन्टस लगातार सात सिजनदेखि सिरी ‘ए’ को विजेता रहँदै आएको छ । रोनाल्डो आएपछि सिरी ‘ए’ मा उसको पकड झन बलियो बन्ने पक्का छ । रोमा गएको सिजन तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । नापोलीले युभेन्टसलाई कडा चुनौती दिएको थियो ।
रोमाले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि रोनाल्डोलाई टक्कर दिन सक्ने खेलाडीको खोजी गरिरहेको छ । त्यसको विकल्पको रुपमा मेस्सी सबै भन्दा पहिलो नम्बरमा छन् । तर मेस्सी बार्सिलोनामै खुशी रहेको खबर छ ।
याे पनि पढाै-
रोनाल्डोको ठाउँमा २२ वर्षीय बोर्जा !
रोमा अध्यक्ष पाल्लोतले बार्सिलोनासँग मेस्सीका बारेमा कुरा गरेको खुलासासँगै रोनाल्डोका लागि इटालीको बसाई सहज भने नहुने पनि बताए । उनले भने, ‘रोनाल्डो राम्रा खेलाडी हुन्, तर इटालीमा उनलाई झन कठिन हुनेछ ।’ पाल्लोतले आइएल मेसाग्गेरोसँग भनेका छन्, ‘हामीले शीर्ष खेलाडी गर्ने छौँ ? यो प्रश्न होइन, हामीले मेस्सीका बारेमा बार्सिलोनासँग कुरा गरिसकेका छौँ ।’ -एजेन्सी
ट्याग्स: Footballar Messi, Leonal Messi
टी–१० लिगः कलन्दर्सविरुद्ध बलिङ गर्दै आन्द्रेको टिम
नख्खु कारागारमा आलमलाई कडा सुरक्षा, कुराकानी रेकर्ड हुने
टी–१० लिगमा सन्दीपआवद्ध कर्नाटकको विजयी सुरुवात
टी–१० लिगः दिल्लीविरुद्ध पहिलो ओभरमै सन्दीपलाई सफलता
टी–१० लिगः सन्दीपको टिमले दियो दिल्लीलाई १११ रनको लक्ष्य
‘जनताको पक्षमा कामकाज राम्रोसँग नगरेको कारणले नै नयाँ विज्ञापन’
आउँदो वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउँछौँः मन्त्री भट्टराई
कास्कीबासीलाई नेता सिटौलाको आग्रहः ‘लोभ–मोहमा नफसेका पौडेललाई एकपटक जिताएर हेर्नुस्’